Gudoomiyaha baarlamaaka Soomaaliya oo dhalinyarada ugu baaqay iney Midoobaan | warsugansomaliya.wordpress.com
Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulan la qaatay dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa dhalinta Soomaaliyeed ugu baaqay iney Shir weyne Iskugu yimaadaan kaasoo ay kaga tashanayaan aayaha dalkooda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in hadii ay dhalinyarada Soomaaliyeed inta ay shiraan ay go’aano soo saaraan ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaankuba ku qasban yihiin meel marinta go’aanada iyo soo jeedinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay kasoo saaraan wadatashiyadooda.
“Afkaartii iyo taladii aad talada dalkiina kuwa wareegi lahaydeen ma haysataan,waxaad iska soo saartaan 275 xildhibaan oo dhalinyaro ah oo noqda baarlamaanka da’yarta Soomaaliyeed,baarlamaanku wuxuu idin siin doonaan tababaro iyo tusaalayn si aad berri u bedeshaan baarlamaanka hadda jira”ayuuyiri gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed SH Cismaan Jawaari.
Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ugu yeeray in dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dacaladiisa iney iskugu yimaadaan kulan ballaaran,wuxuuna tilmaamay in hadii aan la midayn cududa dhalinyarada Soomaaliyeed ineysan muuqaneen awoodooda iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan.
Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed,wuxuuna ku booriyey iney gartaan awoodooda iyo kaalinta ay kaga jiraan bulshada Soomaaliyeed.
← Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh ay Dhashay oo saxaraha dalka Yaman Oon ugu dhintay
R/wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon oo kulan Muqdisho kula qaatay Masuuliyiinta Warbaahinta madaxa bannaan →